Waxaa Talooyin: 10 Jidka Creative Isticmaalka Waxaa
Waxaa Talooyin iyo tabaha: 10 Creative Siyaabaha Isticmaal Waxaa
Chromecast sheegtay in habka ugu fudud ee ay u raaxaystaan ​​video online oo music aad TV. Laakiin xaqiiqda waxa ay tahay waxa uu noqday aalad cajiib ah wax soo saar leh oo xiiso badan inuu kaa caawiyo inaad hesho waxyaabo badan oo lagu sameeyey. Halkan waxaan ku soo kacay 10 siyaabo u gaar ah oo hal abuur leh u leh adeegsiga dheeraad ah waxaa ka mid ah. Waxaad kaloo ka eegi kartaa hagahan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo raaxaysatid files warbaahinta shaashadda weyn .
1. Stream files deegaanka
Haddii aad ku kaydsan kala duwan videos on your computer, Chromecast caawin kara qulquli kuwaas rogtid oo aad TV sidoo kale. All inaad samayso waa jiidi file video ku gal ah tab Google Chrome oo si toos ah uga siiyaa biraawsarkaaga ciyaari doono. Markaas waxaad si fudud u tab in aad TV saari karaa si aad si buuxda u raaxaysan kartaa TV. Waxaa si fiican ugu shaqeeyeen ka MP4 video files caadi ah ama qaab kale oo ay taageerayaan Chrome. Wixii qaabab aqlka, waxaad isticmaali kartaa codsiyada kale sida Wondershare Video Converter in ay gacan ka geysato.
2. Tuura waxaad desktop
Awoodda in ay tuuray desktop oo idil waa fursad gudahood kordhin Chromecast ah. Waxaad ku heli kartaa iyada oo button dheeraad ah ka dibna waxa weeye fallaadha yar hoos u si aad u ogaato goobaha. Halkan waxaad ka dooran kartaa "tuur screen oo dhan" si tuuray desktop oo dhan si ay dongle ah. Laakiin habkaani waxaa weli soo koraya, si aad u la kulmi karaan a cayayaanka yar.
3. Stream filimada ka Google Drive
Haddii aad isticmaalayso Google Drive in uu kaydiyo filimada, waxaad iyaga Chromecast karaa siyaabo dhowr ah oo kala duwan. Warka wanaagsan waa in, users Chrome OS si toos ah qulquli karaan movie ku kaydsan ay Google Drive. Just furo Files Apps ka dooro Drive ah. Markaas ciyaari filimka oo aad arki doonaa icon Chromecast ee ciyaaryahanka.
Haddii aadan u isticmaala Chrome OS tahay, isku day inaad ka soo baxay qaar ka mid ah barnaamijyadooda sida AllCast ama LocalCast , ama xal warbaahinta ah server sida BubbleUPnP ama Plex Server .
Tayada geeyo 4. Change
Haddii aqoon u leh hoorto videos via YouTube ama Netflix, aad u badan tahay in la dhufatay qaar dhibcood arrimaha naqdida iyo screens loading. Wakhtigan, waxaad bedeli kartaa tayada geeyo si uu u sameeyo waxa u nuglaa. Just falgali inuu ka eryo kordhinta Options Google iyo aad reserved kartaa tayada geeyo ah.
5. dir video maqal iyo nidaamyada kala duwan
Laga yaabaa in aad hore u ogaan lahaa in Chromecast qaniinaa audio iyo video galay mid ka mid il, si aad u audio aan u diri kartaa si aad nidaamka codka ku wareejin. Xaaladdan oo kale, a HDMI shawladda audio waa waxa aad u baahan tahay. Waxay kaa caawinaysaa in aad si fudud u jebin HDMI soo galeen video gaar ah oo maqal ah si ay u quudiyaan laba nooc oo kala duwan oo qalab.
6. screen-buuxa inta lagu jiro multitasking
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in la sameeyo waxyaabo kale inta lagu guda jiro loo maqli screen-buuxa ah. Nasiib wanaag, ma jirto workaround ah dadka isticmaala Windows. Just guji ka dhacay alt Alt Tab halka video la ciyaaro shaashad buuxda. Markaas waxaad noqon doontaa meel ka baxsan video ah on your computer, halka ay weli kala joogsi lahayn on your TV.
7. Isticmaal Chromecast aad huriyaan dab
Inkasta oo aanay si rasmi ah uu u sheegay in, Chromecast saari karaa Naarta wax shidin. Dabcan, waxaa jira ma YouTube ama wax kale Google barnaamijyadooda rasmi ah dab ugu shidin, laakiin isticmaalaya Chromecast la daadiyo sida Netflix, Hulu + ama Pandora shaqeeyaa u wanaagsanyahay.
8. Xisbiga YouTube ah
Waxa kale oo weyn oo ku saabsan Chromecast waa in aad saf kartaa YouTube videos in aad app mobile inuu u ciyaaro si aad TV. Waxa kale oo la samayn karaa dad badan oo ku saabsan qalab kala duwan, ha u macruufka ama Android, ilaa iyo inta qof walba waxa uu ku yaalaa shabakad isku mid ah. Just ha qof walba heli ay jecel YouTube videos iyo iyaga qulquli gal TV - aad leedahay xisbiga YouTube deg dega ah.
9. kulan Play aad smartphone
In kasta oo ay tahay ma lagma rasmi ah oo ay taageerayaan-, aad dhab ciyaari karo kulan ku laayeen ugu goynta. Dhab ahaantii, Google ayaa isku dayaya in la isu geeyo kulan web aad casriga ah, kuu oggolaadaan in aad ciyaarta u xakameeyo ayaa on your computer iyadoo la xakameeyo aad casriga ah. Si tan loo sameeyo, furo kulamada, tab in aad Chromecast tuuray kadibna raac tilmaamaha ku-shaashadda.
10. Hel wallpaper Chromecast ah
Marka Chromecast sugayo app ah in ay ku xidhmaan, waxa uu muujinayaa qaar ka mid ah wallpaper qurux badan shaashadda TV la text qaar ka mid ah waxay ku yidhaahdeen in Chromecast diyaar u yahay inuu tuuraan. Xaqiiqada ah oo xiiso leh waa in, waxa kale oo aad iyaga ka arki kartaa sida bogga internetka ah . Si aad u hesho images dhabta ah, waxaad u baahan doontaa si aad u eegto bogga il iyo heli URL ka jiraan. Haddii kale, waxaad iyaga ka qaadan kartaa oo ka qaar ka mid ah loo ururin taas oo si raxmad leh ula wada saaray Web for dadka kale ee ay u soo baxdo iyo rakibi.
> Resource > Video > Chromecast Talooyin iyo tabaha: 10 Creative Siyaabaha Isticmaal Chromecast